Seife Nebelbal Radio Interviews and other news – July 30, 2020 |
Home Afaan Oromoo Seife Nebelbal Radio Interviews and other news – July 30, 2020
Seife Nebelbal Radio Interviews and other news – July 30, 2020
Shira ABO diiguuf dalagamu dura ni dhaabbanna.
Ibsa miseensota ABO Konyaa Sawud Arabiyaa magaalaa Jiddaa.
Bu’uureffamuu Adda Bilisummaa Oromoo irraa eegalee diinni uummata Oromoo kallattii adda addaatiin ABO cabsuufi balleessuuf carraaqaa tureera. Diinni ABO balleessee Oromiyaa dhuunfachuu barbaadu, kan Oromoo hiyyoomsee qabeenya dachee Oromiyaatiin badhaadhuu barbaadu kun keessoo ABO keessattis ergamtoota ijaarratee alaanis waraana irratti geggeessaa tureera. ABOn garuu rakkoo keessaa fi alaan isarratti aggaame hunda ofirraa qolachaa qabsoo Oromoo dandamachiisee asiin ga’eera. Har’as duulli keessoofi alaa ABO irratti geggeeffamu hin dhaabbanne. Inumaayyu mootummaan abbaa irree hogganoota ABO keessatti gartuu ijaarratee shira ijibbaataa xaxaa jiraachuu hubanneerra. Kanas walga’ii Adoolessa 26-27/2020 waajjira ABO Gullalleetti argamutti geggeeffame irraa mirkaneeffanneerra. Kanas mirkaneeffachuu kan dandeenye sababoota adda addaa irraa ka’uuni. Innis:
Walga’iin kun beekamtii Hayyu Duree ABO malee geggeeffamuu.
Maqaa miseensota Gumii Sabaa ABO’tiin waamamee garuummoo miseensonni Gumii Sabaa naannawa Finfinnee jiraatanillee beekuu dhabuu.
Seera dhaabaa cabsee bakka miseensonni Gumii Sabaa argamanii walga’ichi mijuu hin guunnetti geggeeffamuu.
Haala baratamaa hin taaneen guyyoota lamaan walga’iin geggeeffametti humni waraanaa mootummaa mooraa waajjira ABO marsee turuufi mooraa seenee sakatta’insa geggeessuu.
Eegdota waajjira ABO dirqiidhaan waraana itti waamanii doorsisuun mooraa bansiisuu.
Walga’iin guyyoota lamaaf ture kun bajata dhaabaa malee kan maddi galiisaa eessa akka ta’e hin beekamneen geggeeffamuu.
Hogganoonni ABO kaayyoof amanamoo ta’an badii fi shakkii tokko malee hidhamuun isaanii fi haga ammaatti mana murtiitti hin dhiyaatiin tursiifamuun isaanii shira kanaaf haala mijeeffachuuf akka ta’e hubachuun.
Hayyu Dureen ABO Jaal Daawud Ibsaa akka manaa hin baane taasifamuufi bilbilli irraa cufamee odeeffannoo ala akka ta’an taasifamuun shira kanaaf ta’uu hubachuun.
Seera dhaabaa cabsanii hoggana bakka buusuufi jijjiiruuf ajandaa qabachuu qindeessitoota walga’ii kanaa hubachuun.
Walga’ii sana booda ibsi maqaa Gumii Sabaa ABO’tiin ba’e kan yeroo hin eegganneefi shiraan kan guutame ta’uu hubachuu fi wantoota kana fakkaatanirraa walga’iin kun ABO cabsuuf aggaamamee mootummaa biyya bulchuun kan deeggarame ta’uu hubanneerra.
Kanarraa ka’uudhaan nuti miseensonni ABO konyaa Sawud Arabiyaa magaalaa Jiddaa shira ABO diiguuf hojjetamu kamuu dura kan dhaabbannuufi saaxillu ta’uu keenya ibsina.
Dhaaba keenya kan kichuuwwan barattoota lakkoofsi itti hin baane irratti wareegaman, haawwan haadha daa’imaafi dubartii ulfaa kan itti wareegaman, maanguddoonniifi ga’eessonni kan aarsaa itti kaffalan, Qeerroon Bilisummaa Oromoo fi Waraanni Bilisummaa Oromoo wareegama dachaa kaffalee kan asiin ga’e dabarsinee diinatti hin kenninu.
Shira kana dura akka sabaatti dhaabbannee akka qolannuuf waamicha goona.
Miseensonni ABO biyya keessaa fi biyya alaa jiraattan dammaqinsaan hordofuun shira kana saaxilaa ABO badiirraa baraaraa!
Qeerroon Bilisummaa Oromoo aggaammii ABOtti dhufu kamuu qolachuuf akkuma itti jirtan cimsuun dirqama dachaa isinirra jiru ba’adhaa.
Uummani bal’aan Oromoo shirri kun akka dhaabaatti qofa kan dhufe akka hin taane hubachuun uummata Oromoo abdii kutachiisuuf kan aggaamame ta’uu hubattanii akka dura dhaabbattan waamicha isiniif goona.
Nutis miseensonni ABO konyaa Sawud Arabiyaa magaalaa Jiddaa akkuma ABOn nu barsiisetti shira Qabsoo Bilisummaa Oromoo laamshessuuf aggaamamu dura ni dhaabbanna.
Qindeessitoonni shira kanaafi hirmaattonni isaa sadarkaa hubannoo uummata keenyaa hubachuurraa waan harkifattaniif shira kanaan akka hin milkoofne hubattanii akka dhaabbattan isiniin jenna.
Maayiirratti, uummanni keenya biyya keessaa fi ala jirtan Qabsoo Bilisummaa Oromoo wareegamni qaaliin irratti kaffalamaa as ga’e xumura itti gochuuf tokkummaafi wal hubannaadhaan socho’uun qabsoo akka itti fuftan dhaammanna.
Miseensota ABO Konyaa Sawud Arabiyaa magaalaa Jiddaa.
Previous articleHow land disputes erupt in Ethiopia
Next articleEritrean Mercenaries positioned in many areas in Oromia